mardi, 12 février 2019 22:18
Opérateur bois de rose: Jean Eddy Maminirina à Tsiafahy
L'opérateur Jean Eddy Maminirina a été arrêté ce jour, il est transféré immédiatement à Tsiafahy.
mardi, 12 février 2019 22:10
Virginie: 1 200 000 ariary no voarainy androany
Maneho fisaorana antsika rehetra nitondra ambavaka, sy nanampy ara-bola azy i Virginie izay manohy ny fitsaboana azy ao amin'ny hopitaly manarapenitra.
Latsaka ny ranomasony amin'ny fanampiana ataotsika azy, satria dia ora vitsy monja dia nahatratra 1 200 000 ariary ny vola voarainy.
Tsaboina ao amin’ny hopitaly manarampenitra Andohatapenaka-Antananarivo i Masinomenjanahary Virginie Edouardine ankehitriny, efitra faha-8. Mangataka tolotanana izy (034 25 913 79) fa tena mijaly amin’ny aretiny.
Hatreto dia asain'ny dokotera mividy fanafody hatrany aloha, fa mbola tsy fantatra ny fototr'aretina.
mardi, 12 février 2019 17:16
Fisoratana anarana ao anaty lisi-pifidianana: Namory ireo sefom-pokontany teto Antananarivo sy ny manodidina ny CENI
Nomena toromarika ireo sefom-pokontany fa hatramin’ny 15 febroary dia mandray fisoratana anarana ny Fokontany ary tsy afaka mandà ireo olompirenena vonona hanao izany, tsy azo aroso io fe-potoana faritan’ny lalàna io.
Noresahina ihany koa ny tokony hijerena tsara ny firindran’ny asa eo amin’ny fampidirana ireo olona tafiditra ao anaty boky mirakitra ny fisoratana anarana (Carnet de Recensement) sy ny ao anatin’ny firaketana anaty solosaina (Base de Données), mba tsy hisian’ny fifanomezan-tsiny noho ny tranga hoe voasoratry ny Fokontany ao amin’ny kahie fa tsy ao amin’ny milina eny amin’ny CID (Centre d’Informations du District).
mardi, 12 février 2019 17:14
Fanafihana mitam-piadiana: Jiolahy raindahiny iray no lavon’ny balan’ny Zandary, iray hafa azo sambo-belona
Mbola misy iray fahatelo, zanak'ilay voasambo-belona, mbola karohina taorian'ny fifanenjehana teo amin'izy ireo sy ny Zandary ao Analavory Itasy omaly 11 febroary teo tao amin'ny CR Alatsinainikely, Distrika Miarinarivo.
Vola 600.000Ar tamin'ireo very koa no efa tafaverina amin'ny tompony, raha mbola misy kosa ampahan'izany lasan'ilay jiolahy mbola karohina.
Nanafika mpivaro-mandeha iray, izay avy nivarotra tao amin’ny tsena Alatsinainikely, izy telo lahy ireo, io omaly io.
Basimborona sy famaky no fitaovana nampiasain’izy ireo nanafihana. Notorahan'izy ireo ny fiara 404 bâché nitondra ny mpivarotra ary rehefa nijanona dia nokapain'ireo dahalo ny famaky ny lohan'ilay tompon'ny fiara ka nangalarin'izy ireo ny vola tamin’ny « sachet ».
mardi, 12 février 2019 13:08
Radio Nasionaly Malagasy: Nodimandry androany teo amin’ny faha-50 taonany i Hery-Valisoa
Mpanentana fandaharana tao amin’ny Radio Nasionaly Malagasy (RNM) i Hery-Valisoa. Taizan’aretina diabeta izy, ary io no anisany nikiky ny fahasalamany.
mardi, 12 février 2019 12:56
Cette journée est aussi dédiée à l'épilepsie.
mardi, 12 février 2019 12:47
Port-Bergé (Boriziny): Manana olana ny mpamboly katsaka
Simba sy miharingana ny ala ao « Bongolava maitso » noho ny fanitaran'ny mpamboly katsaka ny tanimboliny. Faritra arovana aty Boriziny anefa io toerana io noho izy maro ala.
Nandray fepetra ny tompon'andraikitra izay miaro io faritra io nanomboka ny alatsinainy teo, ka ny voly rehetra tafiditra amin’ny aty alana anatin'ny faritra antsoina hoe : "Noyau dur" dia tsy azon'ny tompony kitihina, ary misy aza ny efa nopotehina. Misy amin’ireo mpamboly no voatazona am-ponja vonjimaika noho io famotehana ala io.
Mila tolotanana: Noheverina ho areti-nify ny an’i Virginie, kinanjo nivadika fivontosana be
Natao hoe areti-nify tsotra kinanjo izao nanonitra niafara amin’ny fivontosana hita amin’ny sary izao ny aretin’i Masinomenjanahary Virginie Edouardine.
Teraka tao Ihosy izy, tsy mianatra intsony, tsy mbola miasa, tsy mananjanaka.
Fiaraha-miasa: Hanampy an’i Madagasikara ny Banky Iraisam-pirenena
Nihaona tamin'ny filohan’ny Repoblika, Andry Rajoelina, ny filoha lefitry ny Banky Iraisam-pirenena ho an'ny faritra Afrika, Hafez Ghanem, nandritra ny diany tao Addis-Abeba, nandray anjara tamin’ny fihaonana an-tampony faha-32 ny Vondrona Afrikanina ny 10 sy 11 febroary 2019.
Nisongadina tamin’izany fa dia hoafainganina ny fanampiana an’i Madagasikara eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana.